Sida loogu isticmaalo Photoshop qaab xirfadaysan oo wax ku ool ah | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Photoshop waa aalad ay adeegsadaan dad aad u tiro badan oo leh astaamo kala duwan. Laga soo bilaabo xirfadleyda ilaa ardayda iyo hiwaayaddayaasha ka bilaabaya adduunka daabacaadda dhijitaalka ah. Waxaa jira faraqyo muuqda oo udhaxeeya noocyada isticmaaleyaashan oo kabaxsan natiijooyinka dhamaadka. Maanta waxaan u hibeyn doonnaa casharro ballaaran oo aad uga duwan waxa aan inta badan la macaamilno. In kasta oo aynaan diirada saari doonin aqoonta farsamada ama qaababka gaarka ah si loo helo natiijooyin gaar ah, waxaan dib u eegeynaa habka ugu wanaagsan ee aan ku horumarin karno mashruuceena (nooc kasta ha ahaadee) xirfad sare iyo nadaafad taasi waa inoo suurta gal.
Guud ahaan, markaan bilowno inaan la shaqeyno codsi kumbuyuutar noocuu doono ha ahaadee, iyo gaar ahaan haddii aan ku bilowno inaan ula shaqeyno qaab is-baray, badanaa ma raacno nidaam ama borotokool gaar ah. In yar ama ka yar oo dareen leh waxaan ku baareynaa, ku baareynaa kuna dhaqan galineynaa aaladaha kala duwan ee naloogu soo bandhigay isdhexgalka. Markii aan xiriirkeena ugu horeysa ka qaadno wadadan, waxaan wax ku baran karnaa sida ugu dhakhsaha badan sida haddii aan tusaale ahaan u isticmaalno buug ama aan raacno tilmaamaha teori, laakiin waxay leedahay bar daciif ah. Naqshadeeyayaasha barta inay la shaqeeyaan noocyadan aaladaha si madaxbanaan iyo xiisaha xiisaha leh, waqti ka dib waxay u muuqdaan inay ka tagayaan qodobo qaar oo bixiya akhrin, amar, nadaafad iyo abaabul. Dhamaadka maalinta waxaan ka hadlaynaa a natiijo xirfad leh taas ayaa lagu muujiyaa dhaqdhaqaaqa aan sameyno inta lagu jiro waqtiga shaqada.
Gaar ahaan markaan u shaqeyno hay'adaha, ama macaamiisha waaweyn, waxaa muhiim ah inaan baranno sida loo daryeelo sawirka shaqadeenu ka bixiso gudaha. Waxaan ula jeedaa tan qalfoofka ugu hooseeya waxayna ku xiran tahay bixinta akhriska labada naqshadeeye iyo kooxda ku hareeraysan labadaba. In kasta oo feylasha hooyo (oo ah kuwa lagu abuuray barnaamijyada laftooda oo leh kordhin sida .psd ama .ai) inta badan aan lala wadaagin waaxyaha kale, waxay in badan ku xirnaan doontaa shirkadda ama macmiilka aan u shaqeyno. Gaar ahaan shirkadaha waaweyn iyo mashaariicda cufan, inta badan waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo wejiyada shaqada ah waaxyo gaar ah iyo hawlo cayiman. Xaaladahaas, guud ahaan waxaa jira kala duwanaansho ku tiirsanaan sare oo ka dhex jirta xubnaha kooxda xirfadleyda ah, sidaas darteed aqriska iyo dhaqaaqa shaqadu waa lama huraan. Guud ahaan, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aan naga baxsan karin:
0.1 Qalabka aan la ogaan
0.2 Abaabul, nadaafad, muuqaal xirfadeed
0.3 Intee in le'eg ayuu mas'uuliyaddaada xirfadeed qaadataa?
0.4 Xirfad ahaaneed kaliya kuma xirna natiijada ugu dambeysa ee shaqadeena laakiin sidoo kale habkayaga
1 1.- Magacaabis
2 2.- Nadiifinta
3 3.- Abaabul
4 4.- Ilaalinta
5 5.- Saami-qaybsiga
6 6.- Iswaafajin
8 8.- Xalinta kaydinta
9 9.- Saxitaanka
10 10.- Baako iyo gaarsiin
Qalabka aan la ogaan
Haddii Adobe Photoshop lagu sifeeyo wax, waa sababta oo ah awooddeeda xad dhaafka ah si ay noo siiso ilo iyo qalab dheeri ah. Waxaan si fudud u heli karnaa habab kale oo aan ku gaari karno hal hadaf. Tan waxaan ula jeedaa in barnaamijkan laga yaabo inuu leeyahay fursado iyo qalab aad u tiro badan oo aanad awoodin inaad dhammaantood si fiican u ogaato. Dhanka abaabulka iyo qaabeynta, waxay kaloo leedahay qalab badan oo aan isticmaali karno, oo ay ka mid yihiin plugins ama kudarrooyin naga caawiya hagaajinta hawlahan haddii aan la shaqeyneyno iskudhaf runtii isku dhafan oo ka kooban xaddi badan oo lakabyo ah, kooxo iyo walxo ah.
Abaabul, nadaafad, muuqaal xirfadeed
In kasta oo ay adkaan karto in la aamino, hababka xulashada shirkadaha waaweyn, waa wax iska caadi ah in tijaabooyin kala duwan iyo imtixaanno la qaado si loo baaro oo looga xusho miirayaasha tayada leh. Intii aan ku gudajiray xirfadeyda waxaan la kulmay habab xulasho oo ka kooban dhowr waji oo horay ugu socday kakanaanta iyo heerka baahida sida ay u dhaceen. Markaynu ka hadlayno deegaanno leh karti-ballaadhan, sifo kasta oo go'aan noqota. Haddii baaritaankaagu sax yahay laakiin soo bandhigida shaqadaada aysan si wanaagsan u qaabeysnayn, abaabulan oo nadiif ah oo isku xiran, tani waxay u shaqeyn doontaa sidii muuqaal taban oo ku saabsan astaantaada xirfadeed Noocyada noocan ah ee faahfaahintana waxaa badiyaa kaliya yaqaan xirfadle naqshadeeye. In kasta oo aan tusaale u soo qaatay shirkad weyn, haddana tani waxay ku shaqaysaa miisaan yar. Haddii macmiilku dib u eego mashruuca aad adiga kula horumarinayso oo uu u arko goob fowdo iyo fowdo ah oo aad adigu laftaadu awoodi kari weydo inaad is dhigto, waxaad bixin doontaa sawir ah xirfad-yaqaan hooseeya, iyadoon loo eegin natiijada shaqadaada. Tani waxay abuuri doontaa kalsooni darro dhinaca macmiilkaaga ah waxayna yareyn doontaa fursadaha ay ku noqon karaan macmiil joogto ah.
Intee in le'eg ayuu mas'uuliyaddaada xirfadeed qaadataa?
Waxaa jira laba fikradood oo ay tahay inaan ku xisaabtano mihnad kasta oo ay leedahay laanta isgaarsiintu oo ay tahay inay toos ula xiriirto wejiga qorshaynta. In kasta oo ay badanaa ka dhacdo wax soo saarka maqalka, waxaan u maleynayaa in lagu dabaqi karo qayb kasta oo sawirka ka mid ah. Waa inaan maanka ku haynaa inaan ku xiran nahay jawi isbeddelo aad u badan ay dhici karaan oo khatar gelin kara taariikhaha bixinta ee lagu heshiiyay ama tayada shaqadeena ugu dambeysa Dhammaantood lama xakameyn karo ama lama sii ogaan karo, laakiin in badan oo iyaga ka mid ah ayaa maamuli kara. Waa muhiim inaan baranno sidaan u kala soocin lahayn.
Waxaan ka hadlaynaa lama filaan ah markay duruufo dhacaan oo aynaan haysan oo taasi bedesho hawlgalka shaqadeena laakiin sikastaba waanu sii ogaan karnay. Marka qoto dheer waxaan ka hadlaynaa dhibaatada saadaalinta iyo abaabulka. Tusaale wanaagsan oo ah dhacdo lama filaan ah waxay noqon kartaa in magaalada uu ka jiro mugdi oo kumbuyuutarkaaga uu dansan yahay adigoon awoodin inaad badbaadiso shaqadii aad soo kobcineysay shantii saacadood ee la soo dhaafay. Uma badna, laakiin way dhici kartaa.
Si kastaba ha noqotee, markaan ka hadlayno aan macquul ahayn waxaan ka hadlaynaa heer sare oo aan macquul ahayn. Tusaale ahaan, in macmiilkaagii la waayo. Tani waa wax fudud oo aan ku xirnayn xakamayntaada.
Waa inaan maskaxda ku haynaa inaanan xakamayn karin wax walba, laakiin dhammaan dhibaatooyinkaas ay bixiyaan aragti la'aan uga gudub masuuliyadeena tooska ah.
Xirfad ahaaneed kaliya kuma xirna natiijada ugu dambeysa ee shaqadeena laakiin sidoo kale habkayaga
Intaas waxaa sii dheer, tani waa mid ka mid ah farqiga muuqda ee u dhexeeya hiwaayadda iyo naqshadeeyaha garaafka. Xirfad yahanku wuxuu xukumaa waqtiyada, wajiyada geedi socodka, wuxuu helaa mas'uuliyado wuxuuna siiyaa gudaha naqshad faa'iido iyo wax soo saar leh (adeegsiga xubnaha kooxda dhexdeeda) iyo dibeddaba (waa la raacayaa waxtarka yoolkaaga ugu dambeeya). In kasta oo qaybtan aan diirada saari doonno barnaamijka Adobe Photoshop, hadana kuwa soo socda waxaan diiradda saari doonnaa barnaamijyada kale iyo mashaariicda heer guud iyo guud ahaanba leh. Tilmaamaha aan ku soo jeedinay qodobkaan wuxuu u adeegi karaa horudhac.
Tani waa qodob aasaasi ah, laakiin isla markaa wax ku ool ah si loo hubiyo nidaamka iyo sharci ahaanta dukumiintiyadayada. Markaan ka shaqeyno arjigayaga, waxaan u baahan doonaa inaan la shaqeyno qaybo kala duwan, walxo, kooxo, lakabyo iyo maaskarada. Waxaa lagugula talinayaa in maadaama aan ku darno cunsurro aan abuuri karno kala dambayn iyo kala dambayn, sidoo kale magac-u-magac-bixinta ama nidaamka magac-bixinta iyo u-yeeridda dhammaan agabyada. Way fiicantahay inaan sameyno a qaab-dhismeed loo qaybiyay darajooyin kala duwan. Marka hore waxaan heli lahayn kooxaha cunsuriyada. Kuwaas gudahood waxaa jiri kara kooxo badan oo leh magacyadooda u dhigma iyo waliba walxaha sida lakabyada. Waxaa lagugula talinayaa in kooxaha loogu magac daro aag ama qaab dhismeedka ay matalaan. Tusaale ahaan:
Line art / Sketches> Character (wajiga [timaha, indhaha, sanka…], jirka [lugaha, gacmaha…]); Muuqaalka (qolka [sagxadda, darbiyada…], bannaanka [geedaha, cirka…].
Inking> Dabeecad (wajiga [timaha, indhaha, sanka…], jirka [lugaha, gacmaha…]); Muuqaalka (qolka [sagxadda, darbiyada…], bannaanka [geedaha, cirka…].
Haddii aad waqtiga ugu yar kubixiso qeexida qaab isku duuban oo abaabulan, waxaad badbaadin doontaa waqti aad u badan maalintaada oo dhan maxaa yeelay uma baahnid inaad raadiso lakabka ama qaybta aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho. Mar alla markii aad abuurto kooxahaaga iyo kala sarrayntaada waxaad u baahan tahay oo keliya inaad jiidato oo aad u habeyso sida ay baahidaadu tahay. Waxaa jira waxyaabo yar oo ka caajis badan helitaanka feyl hooyo oo ka buuxa nuqulada lakabka, isku buuqsan oo aan la helin koox ama fayl.
Hawlaha nadiifinta iyo shaandhaynta waa in lagu sameeyaa xilliyo iyo ugu yaraan nus saac kasta oo shaqada ah haddii aan u baahanahay inaan abuurno nuqullo si toos ah ama lakabyo cusub ah Xaaladahaas oo kale, kuwa ugu badan ayaa ah inay ku dambeeyaan isku urursasho iyo aakhirka inay caqabad ku noqdaan akhriska iyo hannaanka shaqada. Mararka qaar waxay noqon kartaa xoogaa caqabad ah in la hubiyo in ka badan 1000 milyan oo lakab oo aan ku hayno faylkeena si aan u ogaano inay dhab ahaan madhan yihiin ama ayan waxtar lahayn. Tan darteed waxaa jira xeelad aad u weyn oo faa'iido leh oo ah in loo adeegsado amarka Ctrl + T iyo Cmd + T.
Waxaan dib ugu laabaneynaa dib u eegida arinta magacbixinta maxaa yeelay kiiskan, waa inaan maskaxda ku haynaa taas wuxuu ka sii dheereeyaa waxyaabaha ka kooban palette lakabkeena. Faylkayaga mashruuca u gaarka ah, faylalka ugu dambeeya ama la bixiyay, fayllada ay ku jiraan dhammaan faylasha qayb ka ah mashruuca, iyo fiilooyinka iyo feylasha u shaqeeya lifaaqyada. Hadday sharraxayaan, macluumaad ka helayaan ama si toos ah qayb ka mid ah shaqadeenna.
Waxaa jira heerar kala duwan oo loogu magac daray feylasha ama dukumiintiyada aan u dhalanay. Dhexdooda waxaan isticmaali karnaa qaabdhismeedyo sida kan aan soo jeedinayo xagga hoose:
Sideen u dabaqnaa maxaanse u dhisey?
Magaca Hore: Magaca shirkadu waa inuu markasta hormariyo. Sidan ayaa lagu aqoonsan doonaa astaanta mashruuceena iyo keydkeena.
tipo: Sida iska cad waxaan ka shaqeyn karnaa mashaariic noocyo aad u kala duwan leh oo shaqooyin kala duwan leh. Daaqada bartilmaameedka (taas oo ah, dhexaadka lagu soo saari doono [web, paper, video ...] sidoo kale waa in lagu soo daro qeybtaan maxaa yeelay xaalado badan waxay kaa caawin kartaa in la cadeeyo feylka uu yahay iyo shaqadiisa waxay tahay .
Cabbir: Halkan waxaan ka hadlaynaa cabirka muuqaalka feylka ee ma ahan miisaanka uu ku dhex cuno xusuusteenna. Badanaa waxaa lagu muujiyaa pixels. Marka hore waxaan ku dari doonaa cabbirada jiifka ah (ballaca) marka labaadna cabirka toosan (dhererka) feylkeena.
Nooca: Goorma, tusaale ahaan, waxaan u shaqeyneynaa aqoonsiga shirkadeed ee shirkad, waxaan arki doonnaa in nashqadahaan la cusbooneysiiyay oo wax laga beddelay markii ay sannadihii ama xitaa bilooyinku socdeen. Buugaagta aqoonsiga ee shirkadaha macluumaadka nooca waxaa badanaa lagu daraa si shirkadda macmiilku had iyo jeer ay u caddaato qaabka hadda jira. Tani waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah marka laga shaqeynayo noocyada mashaariicda.
Halkan waxaad ku haysaa tusaale adiga oo tixgelinaya dhammaan xuduudaha la soo sheegay: "Apple_Logotype_100x100_V2.psd"
Waa qodob aad muhiim u ah wuxuuna la xiriiraa qaar ka mid ah kuwii aan horay u soo aragnay. Markaan ka hadlayno ilaalinta, waxaan uga hadlaynaa ilaalinta laba dhinac. Midka koowaad ayaa ah kan ugu cad cad, waa inaan hubino shaqadeena marwalba si aan nafteena uga ilaalino suurtagalnimada inaan wax walba lumino. Waxaan xitaa abuuri karnaa nuqullo nuqul ah. Waxaa jira ikhtiyaar is badbaadin ama si toos ah loogu keydiyey Adobe Photoshop waadna baari kartaa ama waad naga sugi doontaa inaan ka hadalno, taas oo aan gadaal ka sameyn doono. Sidan ayaanu ku habeyn doonnaa Adobe Photoshop si ay si otomaatig ah ugu kaydiso dhammaan isbeddelada aan ku sameyno faylalkayaga. Sidaas ayaan ku hilmaami karnaa inaan badbaadinno waxaanna ku shaqeyn karnaa xasillooni weyn oo maskaxeed. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dareen kale oo ilaalin ah oo ay tahay inaan tixgelinno. Adobe Photoshop wuxuu diyaar u yahay inuu ku shaqeeyo qaab raaxo leh oo la ilaaliyo. Waxaa jira habab badan oo lagu hubiyo in faylasha asalka ah ee aan ku shaqeyneyno aan si joogto ah wax looga beddelin.
Xaaladdan oo kale waxaa si weyn loogu talinayaa in loo beddelo lakabyadeenna walxaha caqliga badan (Iskuday inaadan magacyadooda qarin) dooro xulashooyinka na siinaya nabadgelyo aad u weyn. Casharkeenii hore waxaan ugahadlanay qaababka looyaro iyo soosaarka jira waxaanan carabka ku adkeynay in si aad ah loogula talinayo in la isticmaalo dalagyada ka yimaada maaskarada lakabka maxaa yeelay waxay naga caawineysaa inaan ilaalino sawirkeena isla markaana aan tafatirno markaan u aragno inay haboontahay.
Haddii si kadis ah aad uga shaqeynayso sawir u baahan in la qiyaaso, waa inaadan waligaa iska indhatirin faahfaahinta ay tahay inaad marwalba iyo wixii ka sarreeyaba ilaaliso xiriirkeeda xagga cabirka. Si tan loo sameeyo, hubi in markasta oo aad bedesho cabirka walax waxkastoo uu yahay, riix furaha Shift si markaa aad qaabkan ugu beddeli karto cabirkiisa adigoon wax ka beddelin. Sidoo kale, illaa iyo inta aadan la shaqeyneynin vectors, waa inaad maskaxda ku haysaa inay jiraan xaddidaadyo isbeddel ah si aanad u sawirin sawirka ama u keenin inay tayo lumiso. Tan waxaa lagula talinayaa ha u weyneynin wax ka badan 130% cabirkeedii hore, hana ka yareynin wax ka badan 70%. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay ku xirnaan doontaa cabirka maaddada asalka ah, cabirka iyo qeexitaanka weynaaday, kana weynaanaya farqiga dhaqdhaqaaqa.
Marka tan laga hadlayo sidoo kale waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in haddii mashruucaagu uu leeyahay wax soo saar daaqada daabacaadda oo sidaas darteed la doonayo in la daabaco, hubi inta ay le'eg tahay nabadgelyadiisa. Tan waxaa laga samayn doonaa isticmaalka astaamaha iyo calaamadaha dalagga. Hubso inaad ku darto meelahaas iyo astaamahan inaad fiiro gaar ah u yeelatid tilmaamaha daabacadda iyo had iyo jeer intaadan bilaabin ka shaqeynta mashruucaaga iyo ka dib
Waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto in naqshad wanaagsan la qabtay. Si loo hubiyo inaan isku waafajino mashaariicdeena iyo waxyaabaha ka kooban mashruucyadan si wanaagsan, waxaa aad muhiim u ah inaan dhaqaajino sharciyada Adobe Photoshop na siinayo oo aan ku hagaajino qeybahayaga shabakadeena. Waxaan leenahay ikhtiyaarrada aan ku dhajino shabaqa, ku dhajinno pixel, ama xitaa ku dhaji lakabka. Tani waxay hubin doontaa in naqshadeynta ay leedahay a dhammeystiran iyo iswaafajinta saxda ah ee aad ubaahantahay inaad kadhigto mid raali galinaysa indhaha xirfadle ama macmiil kasta.
Qodob kale oo aan u baahanahay inaan diirada saarno waa xiriirka ka dhexeeya xarrago iyo dhexdhexaad. Guud ahaan, iyo gaar ahaan naqshadeeyayaasha hiwaayadda, ayaa la iskudayaayaa inay adeegsadaan saameynta indhaha soo jiidaneysa iyadoo aan la tixgelin qiyaasta. Isticmaalka saameynta sida isugeynta midabada, hooska, qaabdhismeedka, dhaldhalaalka iyo waxyaabaha muhiimka ah waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa iyadoo maanka lagu hayo in guud ahaan ay tahay inaan la shaqeyno burush jilicsan. Waa muhiim inaan cabirno saamaynta iyo qaababka lakabka si markaa natiijada u isu dheellitirto, xirfad u yeelatana.
8.- Xalinta kaydinta
Hore waxaan uga soo hadalnay sida ay muhiim u tahay shaandhaynta iyo howlaha nadaafaddu. Laakiin sida ay muhiimka u tahay baabi'inta qaybahaas aan waxtarka lahayn ayaa ah in la ilaaliyo dhammaan kuwa aan noogu adeegin sababo qaab ah. Haddii aad tahay naqshadeeye khibrad leh waad ogaan doontaa sidoo kale aniga si aan u gaadho xalka aan raadineyno, waxaa lagama maarmaan ah inaan dhowr tijaabo qaadno. Waxaan awoodi doonaa inaan adeegsanno qaabab badan oo lakabyo ah, saameyn iyo xalal inta aan ku guda jirno howsheena. Qaar badan oo iyaga ka mid ah nagama caawin doonaan inaan helno natiijada lagama maarmaanka ah, laakiin aad bay u badan tahay, waana ku nuuxnuuxsaday, aad ayey u badan tahay, in aan u baahanahay ama aan lagama maarmaan u nahay mustaqbalka. Taasi waa sababta had iyo jeer loogula taliyo inaan ku xafidno gal gaar ah ama mashruuc dhammaan qaaciidooyinka nala xiiseynayey laakiin taas sabab uun ama mid kale aynaan "ugu dheganayn" mashruuceenna. Waxaan u baahanahay inaan keydino isla markaasna abaabulno si aan si dhaqso leh ugu helno mustaqbalka.
Baahnayn in la sheego, nidaamka dib u eegista iyo sixitaanka. Naqshadeeye kasta waa inuu ku bixiyaa ugu yaraan rubuc waqtiga ku qaatay nidaamka dib u eegista iyo turxaan bixinta. Heerka abaabulka iyo shaqada iyo dabcan heerka naqshadeynta. Weligaa ha iloobin inaad dib u eegto waxa qaabka midabka waa faylkaaga haddii ay la jaan qaadayaan daaqada wax soo saarka.
10.- Baako iyo gaarsiin
Mar alla markii aad hubto in natiijadu ay tahay sida saxda ah ee aad raadineysay, oo aad ogtahay in tani ay noqon doonto nooca ugu dambeeya, waa inaad ogaataa sida aad "xirmo" ugu samaynayso badeecadaada kama dambaysta ah ugana dhigayso inay gaarsiiso macmiilkaaga. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku laabato adoo adeegsanaya amar iyo qaab dhismeed uu macmiilku ku dhex wareegi karo dhibaato la'aan haddii ay u baahdaan. Go'aan gal ah si aad ugu keydiso dhammaan faylasha ilaha lagama maarmaanka u ah (sawirrada, noocyada, dulinka ...), fayl kale oo faylasha kama dambaysta ah ama kuwa u dhasha ah (haddii mashruucu ka kooban yahay wax ka badan hal) sidoo kalena wey fiicnaan lahayd haddii aad ku darto mid Gal shirkadeed hadaad iskaa u shaqeysato. Dhexdeeda waxaad ku dari kartaa feyl PDF ah oo ka hadlaya adiga, shirkaddaada, mahadnaqida ah inaad shaqaalayso adeegyadaada iyo sawir leh astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » U adeegso Photoshop sida pro run ah 10 tallaabo
Alvaro Coslada dijo
Maqaal wanaagsan, waxyaabahan ayaa isbeddel keenaya!
Jawaab Álvaro Coslada
Osvaldo Suarez muuqaalka booska dijo
Kaalay, aad u xiiso badan, waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Jawaab Osvaldo Suarez
TOP 10 waxyaabaha naqshadeeyayaasha garaafka neceb